नेकपाको शीर्ष तहमै बल्झियो टकराव : एकता कता–कता ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
नेकपाको शीर्ष तहमै बल्झियो टकराव : एकता कता–कता ?
काठमाडौं – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकताको वर्ष दिन पुगेको छ ।
नितान्त फरक धारका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको सिंगो संरचनाको एकता भने अझै भइसकेको छैन । सांगठनिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षमा थुप्रै काम बाँकी छन् ।
भइसकेका काम पनि धेरै छन् तर बाँकी बढ्ता मतभिन्नताका छन् । त्यसैले पूर्ण एकीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
नेताहरू एकता पूर्णतया टुंग्याउन जोडतोडले लागेका देखिएपनि अवस्था कता–कता अल्झिएको छ ।
२००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी २०१९ सालपछि विभिन्न समूहमा विभाजित थियो । अन्ततः ५६ वर्षपछि २०७५ जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक अचानक एक भई राजनीतिक दुनियाँलाई चकित तुल्याएका थिए ।
केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठक वर्ष दिनमा एकपटक पनि बसेको छैन । तत्कालीन पार्टीका तल्लो तहसम्म पूर्ण एकता भइसकेको छैन । पार्टी जिल्ला कमिटी गठन र जनसंगठनको नेतृत्व चयनमा नेतृत्वलाई अति सकस परेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
गत वर्ष जेठमै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण तहको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने शीर्ष नेताहरुले बताएका थिए । त्यसको चार गुणा अवधि बितिसकेको छ । वर्ष दिनपछि बल्लतल्ल जनवर्गीय तथा पेसागत संगठनको नाम, नेतृत्व र केन्द्रीय समितिको संख्या सचिवालयले टुंगो लगाएको छ ।
केन्द्रमा पोलिटब्युरो अझै गठन भएको छैन । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एकतिहाइ अर्थात् १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गरेको छैन । यसको अनौपचारिक गृहकार्य भने नेताहरूले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरुकै कार्य विभाजन अहिलेसम्म भएको छैन । केन्द्रीय विभाग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च नेकपाले बनाउन सकेको छैन ।
भूगोलबाहेककै उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, त्यसअन्तर्गत रहने विशेष जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी, नगर–गाउँ कमिटीअन्तर्गतका महानगर कमिटी, उपमहानगर कमिटी, नगर कमिटीहरु अझै बनाइएका छैनन् ।
वैचारिक रुपमा एकताको राजनीतिक दस्ताबेज अझै नेताकार्यकर्ताले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । दुई अध्यक्षले अन्तिम टुंगो लगाएपछि प्रकाशन गर्ने भनिएको राजनीतिक दस्ताबेज प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको अनिच्छाका कारण थन्किएको छ ।
नेकपाले जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउने बताएको थियो तर तत्कालीन दुई धारका नेताहरुबीच कार्यदिशाका सन्दर्भमा विवाद टकराउन थालेको छ । बुधबार मात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै घोचपेच भएको थियो ।